Mba hanatsarana ny fahasalamanao sy ny fahaverezanao , mila mahafantatra ny fomba hanatsarana ny famadihana. Avy amin'ny sakafo voavoly dia miankina amin'ny asan'ny taova anatiny, ny asan'ny rafitra sy fahasalamana amin'ny ankapobeny.
Inona no manatsara ny fihinanana?
Misy fitsipika vitsivitsy vitsivitsy izay hanampy amin'ny fiatrehana ity olana ity:
Ampiheno ny isan'ny "hydrocarbon" tsotra. Ny ankamaroan'izy ireo dia amin'ny mamy, satria, miditra ao am-bava, dia manomboka mihinana azy avy hatrany izy ireo, mihintsana haingana ary mivadika ho matavy.
Manaova sakafo tsara. Voaporofo fa ny olona lava kokoa no mihinana, ny tsy mihinana azy, midika izany fa nihena ny habetsahan'ny kaloria nihinana.
Alohan'ny hisakafo, misotro rano fitaratra. Ny fanasana sakafo dia tsy ilaina izany, satria handevona ny gaza fitsangatsanganana izay mety ho hita taratra amin'ny fitsaboana.
Inona no sakafo manatsara ny fihinanana?
Tokony hihinana sakafo ao anatinao ianao, izay misy ny fibre :
Cereals . Ny sakafo maraina tsara indrindra dia vilia afon-tsakafo, izay azo ovana amin'ny voankazo sy ny voankazo. Amin'ity tranga ity dia mahazo 1/4 amin'ny fepetra fibaiko isan'andro ianao. Vao haingana, ny be mpahalala indrindra dia ny voamaina voakazo, varimbazaha, sns.
Nuts . Ny fihinanana voankazo 100 grama, ohatra, hazandrano na mando, dia ho tonga hatramin'ny 15% amin'ny voila ilaina.
Sakafo . Mitondrà sakafo, broccoli, asparagus, cucumbers, rambo, sns. Ary ny fibre dia tsy misy afa-tsy vokatra avy amin'ny vokatra, fa koa ao anaty vilany.
Inona avy ireo vokatra manatsara ny famadihana?
Mba hiatrehana io olana io dia soso-kevitra hampidirina ao amin'ny sakafoo ianao:
Avocado . Ny firafitr'io vokatra io dia ahitana tavy mahasoa, izay mampihena ny lanjan'ny kolesterola ao amin'ny ra. Ao amin'ny avokado dia misy 12 g ny fibra.
Citrus fruits . Ohatra, ao anaty lemaka dia asidra ascorbic sy mineraly izay manadio ny vatana amin'ny poizina.
Pears . Ao amin'ny voankazo toy izany dia misy 5 g ny fibre. Ny sorbitol ihany koa - ao anatin'io singa io dia singa mampivoatra ny fihinanana tsaramaso.
Mba hiantohana fa ny vokatra manatsara ny fihinanana dia mitazona ny habetsahan'ireo sakafo mahavelona, ​​dia tokony ho voaomana tsara izy ireo:
Tsara ny mahandro sakafo ho an'ny mpivady iray na marary.
Ny fantsom-boaloboka dia ampiasaina tsara indrindra amin'ny lamba firakotra Teflon, mba tsy hahafahanao mampiasa feta.
Sakafo maina voavoly varimbazaha isan-karazany.
Aza mihinana sakafo mafana sy mangatsiaka loatra.
Raha mamono na misotro sakafo ianao, dia ataovy izay hahamendrika azy ireo.
Mandritra ny fanaovana sakafo dia andramo ny fampiasana tsaramaso sy sira araka izay azo atao.
Aiza ny vitamin B12?
Bananas - tsara sy ratsy ho an'ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy
Mivoatra amin'ny paoma ve izy ireo?
Nahoana no mahasoa ny caviar mainty?
Aprikots - votoaty kalorika
Areti-koditra kardia - mahatonga, fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Fahalalana ara-tsaina sy ara-tsaina
Karazan-doko toy inona moa no safidy?
Ahoana ny fomba hampiasana ny Dadabe Noely?
Vehivavy mpangalatra no nangalatra sary sy vola tsy nalain'i Paris Hilton
Dessert of bananas
Tsara tarehy: Jennifer Lopez sy Alex Rodriguez nivoaka mba hihinana gilasy miaraka amin'ny ankizy
Inona no atahoran'ny alika alika?
Gripana gripa amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsaboana
Joe Perry dia hopitalina avy amin'ny fampisehoana iray tao New York
Ptosis ny vata mangatsiaka